गंगायै नमः शिवका जठामा गंगा रहदा किन जल चढाईन्छ ? - मालागिरी समाचार
१७ माघ २०७४, बुधबार ०४:३८
Home›विचार/विश्‍लेषण›गंगायै नमः शिवका जठामा गंगा रहदा किन जल चढाईन्छ ?
गंगायै नमः शिवका जठामा गंगा रहदा किन जल चढाईन्छ ?
– राधिकादेवि आचार्य
यस प्रसङ्गको कथा विस्तृत छ तापनि प्रश्नको उत्तरमात्र समावेश गरिएको छ । सूर्यवंशी राजा सगरफाप्रपौत्र (पनाति) भगीरथको कठोर तपस्याबाट प्रसन्न भएका विष्णु भगवानका चरण कमलबाट उत्पन्न भएकी गंगालाई विष्णुले पृथ्वीमा जान आज्ञा दिनुभयो । गंगा पृथ्वीमा जान लाग्दा आफ्ना अहंकार पूर्वक भयानक शब्दद्वारा तीनै लोकलाई थर्कमान तुल्याउँदै मेरो वेग कसले रोक्न सक्दछ । यसरी गंगाको अभिमानलाई रोक्न सबै देवता एकत्रित भई शिवलाई आराधना गरेर शिवजीले आफ्नो जटामा छिपाई दिनुभयो ।
तपस्यारत भगीरथ गङ्गा धेरै समय नआउँदा पुन शिवजीको तपस्या गरे । तपस्याले प्रसन्न भएका शिवले जटाको एकभागबाट गंगालाई छोडि दिनुभयो । गंगाले विष्णु र शिवले मलाई पृथ्वीमा जान बाध्य बनाएका छन्, म पृथ्वीमा जादैन भनि प्रज्ञाका शरणमा गइन् । प्रज्ञाले गंगालाई आउनुको कारण के हो भनि सोध्नुभयो । गंगाले प्रार्थना गर्दै हे पिता विष्णु र शिवले मलाई पृथ्वीमा जान आज्ञा दिएका छन् । म स्वर्गमा रहेकी मलाई पृथ्वीमा जाने इच्छा छैन । यो संकटबाट रक्षा गरिदिनुस् । पृथ्वीमा अनेक प्रकारका जीव जन्तुहरु पापी कृतध्नहरु छन् । उनीहरुले मेरो जललाई कुचेली मलीन गराइदिनन् । मलाई अनि ज्ञानी होला । यस कारण हे प्रभा रक्षा गर्नुस् ।
गंगाको यी वचन सुनि ब्रह्मा भन्नुहुन्छ – हे पुत्री यसरी हठ नगर । तिमी अत्यन्त भाग्यमानी छौ । म तिम्रो वचनबाट प्रसन्न छु । वर दिन्छु सुन तिमी आज देखि तिनै भुवनकी लोक पावनी, मोक्षदात्री पापमोचिनी जगन्माता नामले प्रसिद्ध हुनेछौ । यो चराचर जगत्की जननी जलमा कुनै पनि पापीजनले स्नान गर्यो भने पनि ऊ पापबाट मुक्त हुन्छ । यदि प्राणान्तको समयमा एक वृद्ध जल मुखमा पर्यो भने त्यो जल स्वर्गधाय पुग्नेछ । जो मनुष्यले तिम्रो जलमा गङ्गे भन्दै स्नानगरेर त्यहि जल शिव लिंगमा अर्पण गर्लान् तिनीहरु पाप देखि मुक्त भएर स्वर्गमा जानेछन् । तिमी शिवका जटा रहेर उनीहरुलाई आशीर्वाद दिदै शिव जटामा रहँदा हर्षित हुनेछौ । तिमी शिवका जटामा नै रह्यौ यसमा सन्देह छैन भनि प्रज्ञाले गङ्गालाई वरदान दिई अन्तरध्यान हुनुभयो ।
यसरी गङ्गामा स्नान गरेर गङ्गाको जल शिव लिङ्गमा चढाउने र पितृतर्पण गरेमा जन्मान्तर को पापनास हुन्छ र पितृ ऋणबाट मुक्त भइन्छ भन्ने उक्ती अनुसार आज पनि हामी गंगामा स्नान गरेर शिवजीको लिगंमा जल अर्पण गर्दछौ । यो वास्तवमा शिवजीको एउटा अद्भूत लीला रहेछ भन्ने अवगत गरौं ।
यस सन्दर्भमा गङ्गाको शक्ति अपरंमर छ । भन्ने एक कथा छ । प्राचीन समयका संस्कृत विद्वानहरुमा पण्डितराज जगन्नाथ संस्कृत साहित्यका अलौकिक प्रतिभायुक्त हुनुहुन्थ्यो । उहाँका धेरै रचनाहरु छन् । जो संसारभरमा उहाँका आयोजना गरेका शास्त्रार्थमा पारंगत भएका जगन्नाथलाई पण्डितराज पदले विभूषि गराएका थिए । उसको पण्डिराज जगन्नाथ नाम रह्यो ।
उहाँको भाग्यवस यवन कन्यासँग वैवाहिक सम्बन्धका कारण उहाँलाई हिन्दु धर्मालम्वि विद्वानहरुले विद्वत्समाजबाट तिरस्कार गरिदिए । यो अपमान सहन नसिकी पाण्डे जगन्नाथ काँशीमा गएर गङ्गानदीको तटमा बसेर आफैले रचना गरेको गंगा लहरी पाठ गर्दै निराहार भई गङ्गालाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ ।
हे गङ्गो मैले अभिमान गरेर तपाईको शक्तिलाई अपमान गरे । अब निराधार भएको म कसको आधारमा जाउ हे माता शिवका जटामा रहेर चञ्चल तरङ्गले मनुष्यको पापरुपी भयनाश गर्नुहुन्छ । हे जननी प्राणान्तको समयमा जो कोही जनले पनि गङ्गा शब्द उच्चारण गर्दैमा मुक्ति पाउछ । सगरका साठी हजार पुत्रको उद्धार गर्नको लागि हजुर पृथ्वीमा आउनु भएको छ । हे अम्बे हजुरका काखमा बसेर मैले स्मृति गायन गरिराखेकी छु मलाई आफ्नै काखमा राखेर विलीन गराउनुस् । यसरी पण्डितराज जगन्नाथका भक्तिभावले प्रभावित भएकी गंगाले तरङ्गकाद्वारा डुबाएर जलमा विलिन गराउनुभयो । यस्ती पवित्र गङ्गालाई हामी सतत प्रातः गङ्गो गङ्गे स्नान गरौं, स्नान गर्न नसके बसेर भए पनि गङ्गे भनौ ।
“सस्तो लोकप्रियता आम युवा पुस्ताले त्याग्नुपर्छ” – ...